Ifilimu ye-CPE yefaskoti yeCPE
Iteyiphu yokutywina i-PEVA yomsila wokukhusela ...
Le mveliso yeyona mveliso yethu ithengiswa kakhulu ukusukela oko ubhubhane we-COVID-19 kwihlabathi liphela ngowama-2020. Luhlobo lwe-PEVA engenawo manzi eyenziwe ngezinto ezidityanisiweyo, nesetyenziselwa unyango lwamanzi kwimigangatho yeempahla ezikhuselayo. Xa kuthelekiswa ne-PU okanye imitya yokuncamathelisa esekwe kwilaphu, inexabiso eliphantsi ...
Ifilimu yokukrola luhlobo lwezinto ezisika isicatshulwa esifunekayo okanye ipateni ngokukrola ezinye izinto, kunye nobushushu cofa umxholo okroliweyo kwilaphu. Le yinto edibeneyo yendalo, ububanzi kunye nombala unokwenziwa ngokwezifiso. Abasebenzisi bangasebenzisa le nto yokwenza pr ...
Imicu engenawo manzi isetyenziswa kwimpahla yangaphandle okanye izixhobo zombane njengohlobo lwekhasethi yonyango lomphetho ongenamanzi. Okwangoku, izinto esizenzayo zi-pu kunye nelaphu. Okwangoku, inkqubo yokusebenzisa iziqwenga ezingamanzi kunyango lwee-seams manzi yaziwa ngokubanzi kwaye yamkelwa ngokubanzi ...
I-PEVA iteyiphu yokutywina umphetho weempahla ezikhuselayo
Le mveliso yeyona mveliso yethu ithengiswa kakhulu ukusukela oko ubhubhane we-COVID-19 kwihlabathi liphela ngowama-2020. Luhlobo lwe-PEVA engenamanzi eyenziwe ngezinto ezidityanisiweyo, nesetyenziselwa unyango olungena manzi kwimigangatho yeempahla ezikhuselayo. cm kunye 2cm, ubukhulu 170 micron. Thelekisa ...
Ifilimu ye-TPU eshushu yokunyibilikisa efanelekileyo ekumanyanisweni kwePVC, ulusu olungelulo, ilaphu, ifayibha kunye nezinye izinto ezifuna ubushushu obuphantsi. Ngokwesiqhelo isetyenziselwa ukwenza i-PU foam insole efanelekileyo-yendalo kwaye ayinabungozi. Xa kuthelekiswa nokubopha iglu engamanzi, th ...
Yifilimu ye-PU fusion ye-thermal enembonakalo eguqukayo edla ngokusetyenziswa xa kuhlanganiswa ulusu kunye nelaphu, kunye nomhlaba wokulungiswa kwezihlangu, ngakumbi ukudityaniswa kwe-insoles ye-Ossole kunye ne-Hypoli insoles. Abanye abavelisi be-insole bakhetha iqondo lobushushu elinyibilikiweyo eliphantsi, ngelixa ezinye zangaphambili ...
It is a translucent thermal polyurethane fusion sheet which is for the bonding of super fiber, leather, cloth cloth, glass fiber board, etc. like Outdoor clothing placket / zipper / pocket cover / hat-extension / embroidered trademark. Inephepha elisisiseko elinokwenza ukuba kube lula ukufumana indawo ...
Le mveliso yeyenkqubo ye-TPU. Yimodeli esele yenziwe iminyaka emininzi ukuhlangabezana nesicelo somthengi sokuthamba kunye neempawu zobungqina bamanzi. Okokugqibela iya kwimeko eqolileyo. ezilungele indawo ezidityanisiweyo zangaphantsi ezingenamthungo, iibrasi, iikawusi kunye namalaphu e-elastic nge ...
Ifilimu ye-EVA eshushu yokuncamathelisa ayinabumba, ayinambitheki kwaye ayinetyhefu. Kukho ipolymer enyibilikayo ephantsi eyi-ethylene-vinyl acetate copolymer. Umbala wayo ngumbala otyheli omhlophe okanye omhlophe okanye igranular. Ngenxa ye-crystallinity ephantsi, ukuthoba okuphezulu, kunye nemilo efana nerabha, iqulethe i-polyethyle eyaneleyo ...
I-EVA eshushu inyibilika kwifilimu yokuncamathela
I-W042 yiphepha leglue elimhlophe elimbonakalo yenkqubo ye-EVA. Ngolu phawu lubalaseleyo kunye nolwakhiwo olukhethekileyo, le mveliso iziphatha ngokuphefumla okukhulu. Kule modeli, inezicelo ezininzi ezivunywa ngokubanzi ngabathengi abaninzi. Kufanelekile ukuba ...
Ifilimu yokuncamathela eshushu ye-PA sisinyibilikisi eshushu semveliso yefilimu eyenziwe nge-polyamide njengezona zinto ziphambili ziphilayo. I-Polyamide (PA) yipolymer yomgangatho we-thermoplastic kunye nokuphindaphinda iiyunithi zeqela le-amide kumqolo weemolekyuli oveliswe yi-carboxylic acid kunye nee-amine. Ezi athom hydrogen kwi t ...
I-TPU ishushu yokuhombisa isitayile sephepha
Ifilimu yokuhombisa ikwabizwa ngokuba yifilimu enobushushu obuphezulu kwaye iphantsi ngenxa yento elula, ethambileyo, e-elastic, enamacala amathathu (ubukhulu), ekulula ukuyisebenzisa kunye nezinye izinto, isetyenziswa kakhulu kwiindwangu ezahlukeneyo zelaphu ezifana nezihlangu, impahla, umthwalo, njl. Kukhethiweyo kukhetho lokuphola kwefashoni kunye ne-spo ...